Isku-darka Foojarka, Kuuboonada, iyo Xallinta Koodh-dhimista | Martech Zone
Koodhadh dhimista ayaa ah habka ugu wanaagsan ee lagu sasabto booqdahaaga inuu xidho. Hadday tahay qiimo dhimis ballaaran ama dhoofinta bilaashka ah, sicir-dhimistu waxay sameyn kartaa farqiga oo dhan. Waagii hore, annaga ayaynu ku dhisnay iyaga oo adeegsanaya noocyada barcode ka dibna ku raadjoogno cinwaanka emaylka. Ma ahayn wax lagu farxo… gaar ahaan marka aad ku darto kakanaanta furashooyinka badan, wadaagista koodhka, iwm. Intaa waxaa sii dheer, noocyada xarfaha ayaa si fiican uga shaqeeyay khadka tooska ah, laakiin waxaan ku qasbanaanay inaan u dhisno sawir iyaga si firfircoon ugu habboon emayl ahaan.
Foojarka, sicir-dhimista iyo lambarka kuuboonku badanaa waa la xumeeyaa, sidaa darteed barxad lagu hago iyaga ayaa muhiim ah. Laba nidaam ayaa dhawaan looga hadlay an golaha emailka Waxaan ka tirsanahay:
iVoucher - Foomka Suuqgeynta Foojarka
iVoucher wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si buuxda u maamusho oo aad u gayso dhammaan foojarkaaga, kuuboonada iyo lambarrada qiimo dhimista ee ka socda hal madal oo martigelisay.
Abuur Foojarro - Samee foojarro soo jiidasho leh oo si otomaatig ah loogu hagaajiyo emaylka, shabakadda, bulshada iyo moobiilka adoo adeegsanaya adeegsigooda adeegsigooda.
Daabac foojarka - Ku daabac foojarada marinnada kala duwan isku mar si aad u gaarto gaarista ugu badan.
Xogta Qabashada - Xogta lagu qabtay bogagga soo degitaanka ee sumadda leh waxay kuu oggolaaneysaa inaad si fudud ugu maamusho xiriirada macaamiisha dhexdeeda barta.
Foojarada Foojarada - Soo iibso foojarrada si aamin ah waqtiga-dhabta ah, khadka tooska ah iyo dukaanka.
Warbixinta - Waxqabadka warbixinta oo dhameystiran waxay ka dhigan tahay inaad qabsan karto oo aad maamuli karto macaamil kasta oo macaamil ah oo ku saabsan foojarkaaga.
Voucherify - Foojarka Suuq-geynta API
Kuwa idinka mid ah ee doonaya inay soo saaraan xal adag oo ay dhexgalaan gudaha, Hubin waxay siisaa howl adag API inaad gasho, raadiso, oo aad ka iibsatid lambarrada kuubannada ah meel kasta oo aad ka hesho.
Iyadoo loo yaqaan 'REST API', koodhadhyada ayaa lagu dhex dari karaa websaydhada (macaamiisha dhinac-ka ah JS SDK, hubinta qalabka wax lagu iibsado), barnaamijyada moobiilka (Android iyo iOS SDKs), ama gadaasha dambe (PHP, Ruby, Node.js, Java SDKs, Node .js sample sample) barnaamijkaaga. SDKs adag ayaa dhammaantood la heli karaa.
Guji si toos ah mudaaharaad toos ah:
Hel 3 bilood Bilaash ah Tijaabada Voucherify!
Tags: APIkuubbo apikoodh kaararkafurashada kuubankalambarrada dhimistanambarrada 'coupchimp coupon'nambarrada qiimo dhimista ee mailchimpmadaxfurashadafurashada foojarkanidaamka foojarkaxaqiijin
Jul 18, 2016 markay ahayd 4:16 AM
Mahadsanid Douglas, waad ku mahadsan tahay liiskaaga. Akhristayaasha MarketingTech Blog waxay ka heli karaan koodh xayeysiin u gaar ah muddo 3 bilood ah oo bilaash ah Voucherify halkan http://redeem.voucherify.io/marketingtech